စုချစ်သူ: ၂၀၁၀ အင်္ဂလိပ် မြန်မာပြက္ခဒိန် - ကျေးလက်ကဗျာများ
Posted by စုချစ် at 1/22/2010 07:53:00 AM
thz for 2010 Calendar...
Thanks Ma MMA,
Best idea and presentation.
ီပြက္ခဒိန် Down သွားပါပြီ...ကျေးကျေးစ်
ပြက္ခဒိန်ကို download ယူသွားတယ်၊ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
thanksalot, ma chit su.
Thanksalot for ur try hard.
ဘုန်းဘုန်းလည်း ၂၀၁၀ ပြက္ခဒိန်း ကူးသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်....
ီDownloaded and thank you so much !!!
ပြက္ခဒိန် Down သွားပါတယ်..
ပုံလေးတွေနဲ့ ကဗျာလေးတွေက တကယ် လိုက်လဲလိုက် ချစ်စရာလဲ အရမ်းကောင်းတယ်...း))
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးတွေ...း))
မတွေ့တာကြာပြီ... တရက်လောက် တွေ့ကြအုံးမယ်လေ...း))
၂၀၁၁ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ပြက္ခဒိန် , When u making for us? We are waiting for 2011 Calendar. Thanks for ur share 2010. By the way Happy New Year, Ma Chit Su. Wish u all the best.